कति छ कोरोनाको तौल ? « Mero LifeStyle
कति छ कोरोनाको तौल ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 11 June, 2021
सायदै हामीले नसोचेको कुरा हो, विश्वभरको कोरोना भाइरसलाई एकै स्थानमा जम्मा गर्दा त्यसको तौल कति होला ? इजरायलको विजम्यान इन्स्टीच्यूट अफ साइन्सका वैज्ञानिकले हालै मात्र यो भाइरसको वजनको अनुमान लगाएका छन् । कोरोना भाइरसको यो बेलामा कुनैपनि स्थानमा एकै समयमा १० लाखदेखि १ करोड मानिसलाई संक्रमित बनाएको छ ।
यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकले सारा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको तौलको गणना गरेका छन् । यस समय सारा विश्वभर रहेको कोरोना भाइरसको कुल वजन ०.१ देखि लिएर १० किलोग्रामसम्म हुनसक्ने वैज्ञानिकको अनुमान छ । यो अनुमान संक्रमितको संख्याको आधारमा गरिएको हो । शोधकर्ता रोन मिलो भन्छन्, कम वजनको अर्थ, कम खतरनाक छ भन्ने होइन, यो बेला १७ करोड भन्दा धेरै मानिस संक्रमित छन् भने ३७ लाख मानिसको ज्यान गएको छ । यो रिसर्च प्रीसीडिंग्स अफ दी नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेसमा प्रकाशित छ ।
यसरी भयो गणना
प्रोफेसर मिलोका अनुसार बाँदरमा कोभिड १९ भाइरस संक्रमणको दर निकालियो । जब त्यसमा संक्रमणको अत्याधिक असर देखियो, रोनको टीमले बाँदरको फोक्सो, टन्सिल र पाचन प्रणालीमा भाइरसको मात्रा नापियो । त्यसपछि भाइरसको कणलाई प्रतिग्रामको हिसावमा गणना गरे । त्यसपछि मानिसमा यसको तुलना गरियो ।
एक व्यक्तिमा कति भाइरस हुन्छ ?
भाइरसका कणको संख्यालाई आपसमा मिलाएर एक संक्रमित व्यक्तिमा एक माइक्रोग्रामदेखि लिएर १० माइक्रोग्रामसम्म भाइरसका कण हुन्छन् ।
अहिले बेलायतको एउटा समाचार अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ । त्यहाँ एक ११ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएकी छन् । यससँगै उनी